Ilay toeram-pandihizana lasa Fiangonana
dimanche, 23 août 2015 19:50
Hafakely : Ambalakisoa niofo ho Ambalatsara
Andro lehibe ho an’ny Eglizy Rhema tao Ambatondrazaka androany. Nanatontosana fanompoampivavahana voalohany tao amin’ny efitrano Ambalatsara Antanifotsy. Fiangonana faharoa an’ny Eglizy Rhema ao Ambatondrazaka io miorina ao Antanifotsy io. Efitrano fanaovam-pety sy toby fieren’ny jiolahy fahiny ity Ambalakisoa ity no lasa fiangonana. Betsaka no efa nitondra faisana tamin’izany toerana Ambalakisoa izany fahiny, lasibatra hatramin’ny mpitandro ny filaminana.
vendredi, 21 août 2015 15:12
Toliara : Tovovavy nanala bakalôrea teraka zazalahikely
Faly sahirana ity tovovavy iray 19 taona mpiadina nanala fanadinana bakalôrea tao Toliara, ny alakamisy maraina. Nahazo zanaka nefa ny fanadinana tsy maintsy najanona. Raha ny fanazavana azo dia nihetsi-jaza tao amin’ny toeram-panadinany izy, ka tsy maintsy nentina namonjy haingana mpampivelona. Teraka soa aman-tsara tamin’ny 9 ora sy sasany ary lahikely nilanja 2,900 g ny zanany, izay salama tsara, raha ny nambarany mpampivelona.
jeudi, 20 août 2015 22:49
Antanimasaja – Mahajanga : Anorenan’olona trano ny tanim-pasan’ny Silamo
Efa feno angamba ny toerana ao Mahajanga tampon-tanana ka eny ambony ny fasan’ny Silamo no manorina trano fonenana ny sasany, toy ny ao Antanimasaja. Velaran-tany 4 hekitara no misy ny fasan’ireo mpino silamo ao Antanimasaja io ary efa saika feno trano avokoa. Nidina nijery ifotony io toe-javatra io ny tompon’andraikitry ny Kaominina ambonivohitr’i Mahajanga hanamarina ireo trano miorina ambony ny fasana ireo ka hiroso amin’ny fandrodanana avy hatrany raha toa tsy ara-dalana ny fisiany.
jeudi, 20 août 2015 12:44
Ihosy : Vola sandoka 5 tapitrisa Ariary sarona saika harotsaka tamina banky
Mitonona ho mpivarotra ny tompon’ny vola. Nambarany fa vola maty tamin’ny varotra nataony tany Ranohira ireto vola ary ndeha harotsaka amin’ny banky tao Ihosy. Teo am-panisana ny vola ny mpiasan’ilay banky no nahatsikaritra fa hafahafa ny taratasin’ilay vola. Rehefa avy notsirihana sy nohamarinina ireo vola ary nitovy avokoa ny laharany. Niantso mpitandro filaminana avy hatrany ny tompon’andraikitr’ilay banky. Nentina niverina tany Ranohira ilay rangahy nikarohana izay olona nanome azy ireo volaireo, saingy efa tsy hita intsony.